श’वलाई काँधमा बोकेर पूर्व सैनिक नै प्रहरी चौकीमा पुगेपछि हङ्गामा, त्यसपछि जे भयो… — Imandarmedia.com
एजेन्सी । नशामा रहेका भारतीय पूर्व सैनिकले कार चलाइरहेका बेला एक व्यक्तिलाई ठक्कर दिए। जसका कारण ती व्यक्तिको मृत्यु भयो। ठक्करबाट ज्यान गुमाएका ती व्यक्तिलाई पूर्व सैनिकले काँधमै बोकेर प्रहरी चौकी पुगेका छन्। यो घटनामा भारतको छत्तिसगढको बलरामपुरको हो।
प्रहरी चौकीमा पुगेर शव त्यहाँ राखेपछि उनले आफूले मारेको स्विकारेका थिए। ति सैनिकको नाम लालमन मरावी रहेको छ। भारतीय प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
बलरामपुर जिल्लाको वाड्राफनगर विकास खण्डमा भएको यो घटनाले आम मानिसलाई चकित तुल्यायो। दुई किलोमिटर हिड्दै ती पूर्व सैनिकले शव प्रहरी चौकीमा पुर्याएका हुन।
चिनियाँ कम्पनीको अनौठो नियम, एकभन्दा बढी पटक ट्वाइलेट गए जरिमाना
कल्पना गर्नुस् त तपाईंले कुनै कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ र कामकै दौरान पिसाब लागेर तपाईं ट्वाइलेट जानुपर्दछ । तर जब उक्त कार्यालयमा तपाइइंलाई ट्वाइलेट जाने अनुमति हुँदैन भने तपाईंको हालत के होला ?
कुनै कर्मचारी वा कामदारलाई ट्वाइलेट जान नदिने भन्ने सायदै दुनियाँमा कुनै कम्पनीको नियम होला । तर एउटा चिनियाँ कम्पनीले भने आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई १ पटकभन्दा धेरै ट्वाइलेट जानमा निरुत्साहित गर्ने नीति नै बनाएको छ ।
उक्त कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले आफ्नो एक कार्यदिनमा केवल १ पटकमात्र ट्वाइलेट जान पाउँदछन् । एकपटक भन्दा धेरैचोटि ट्वाइलेट जान चाहने कर्मचारीले जरिमाना तिर्नु पर्दछ । दुनियाँमा अन्त कतै नभएको यस्तो अमानवीय लाग्ने नियम लागू गर्ने चिनियाँ कम्पनीको नाम अम्पु इलेक्ट्रोनिक्स साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी हो ।
आफ्नो उक्त अनौठो नीतिको प्रतिरक्षा गर्दै कम्पनीले कर्मचारीहरुको अल्छिपना भगाउन र कार्यकुशलता सुधार्नका लागि पटक पटक ट्वाइलेट जाने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउने नियम लागू गरिएको जनाएको छ ।
पटक-पटक ट्वाइलेट जाने बहानामा समय कटाउने कामचोर कर्मचारीलाई लगाम लगाउन यस्तो नियम बनाइएको हो । एकपटक भन्दा बढी ट्वाइलेट जाने कर्मचारीले हरेक पटकको लागि २० चिनियाँ युआन जरिमाना तिर्नु पर्दछ ।
गत डिसेम्बर २० र २१ मा गरी ७ जना कर्मचारीले बढी पटक ट्वाइलेट गएवापत जरिमाना तिरेका थिए । कम्पनीको यस्तो कठोर तथा अमानवीय नियमको बारेमा व्यापक चर्चा भएसँगै स्थानीय प्रशासनको ध्यान आकृष्ट भएको छ । स्थानीय प्रशासनले उक्त मामिलाको छानबिन सुरु गरेको बताइएको छ ।
प्रशानले त्यस्तो नियम खारेज गर्न र जरिमाना असुल गरिएका कर्मचारीहरुको रकम फिर्ता गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । तर कम्पनीका अधिकारीले भने पिसाब फेर्न गएवापत लिइने जरिमाना कर्मचारीबाट नगद असुल नगरिने र कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बोनसबाट कट्टी गरिने बताएका छन् ।
कतिपय कर्मचारीहरु पटक-पटक ट्वाइलेटमा गएर चुरोट पिउने र काममा ढिलाइ गर्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यस्तो नियम लागू गर्नुपरेको कम्पनीको जिकिर छ ।
युरोप र एसिया महादेशको सिमानामा पर्ने मुलुक टर्कीलाई एसिया र युरोप बीचको पुल पनि भनिन्छ । टर्कीलाई अर्को अनौठो नामले पनि चिनिन्छ, त्यो हो ‘युरोपको विरामी’ । आखिर टर्कीलाई किन युरोपको बिरामी भनिन्छ त ? यसको अनौठो इतिहास छ ।
टर्कीको इतिहास निकै पुरानो तथा गर्विलो छ । इशापूर्व युनानीहरुको बसोबास तथा स्थानान्तरण अनि पछि सन् ८०० देखि १४०० सम्म तुर्क जातिको प्रादुर्भाव टर्कीको इतिहासका प्रमुख लिखित घटनामध्ये पर्दछन् ।
इतिहास अनुसार इशापूर्व १२०० ताका होमरको ओडिसीमा वर्णन गरिएअनुसार ट्रोयको युद्धमा पनि टर्कीको पश्चिमी तटमा ट्रोयबासी तथा युनानी द्विपमा रहेको साम्राज्यको बीचमा भएको थियो ।
इतिहासमा टर्की विभिन्न साम्राज्यहरुको अधिनमा रह्यो । ५३० इशापूर्वमा टर्की इरानको फारसी साम्राज्यको हिस्सा बनेको थियो । त्यस्तै युनानीहरुसँगको युद्धका कारण टर्की कैइन् वर्षसम्म ग्रिक र इरानी साम्राज्यबीच बाँडियो ।
इशापूर्व ३३० मा पुनः टर्की अलेक्जेन्डर महानको मेसेडोनियन साम्राज्यको अधीनमा आयो र पछि यो रोमन साम्राज्य तथा सासानी साम्राज्यको पनि हिस्सा बन्यो ।
सासानी साम्राज्यको अन्त अर्थात् सन् ६३५ पछि त्यहाँ इस्लाम धर्मको प्रचार भयो र पछि त्यो औगुज, सल्जूक तथा उस्मानी टर्किस सुन्नी इस्लाममा परिणत भयो ।
१६ औँ शताब्दीताका टर्किस अर्थात् अटोमन साम्राज्यले पूरै टर्कीमा कब्जा जमायो । १८ औँ सताब्दी सम्म अटोमन साम्राज्य निकै विशाल तथा शक्तिशाली बनेको थियो । तर टर्किस सुल्तानहरुको विलासी प्रवृत्ति तथा अत्याचार नै उक्त साम्राज्यको पतनको कारण बन्यो ।
अटोमन सुल्तानहरुको अत्याचार टर्कीमा यतिधेरै बढ्यो कि त्यहाँ बस्ने मानिसहरु विस्तारै आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन सुरु गरे । जसका कारण अटोमन साम्राज्य कमजोर हुन थाल्यो । १९ औँ शताब्दीमा उक्त साम्राज्यको पतनको प्रक्रिया लगातार बढ्दै गयो । विस्तारै टर्कीको अवस्था यति कमजोर बन्यो कि टर्कीको नाम नै युरोपको विरामी रहन गयो ।